fandefasana - Infinity-Electronic
Fomba fandefasana entana
Infinity-Electronic.hk dia manolotra karazana fomba fitaterana isan-karazany: mety hanampy anao handamina ny fametrahana ny fonosana amin'ny alàlan'ny FDEx, DHL, UPS, TNT, EMS, na ny fomba hafa tianao, azonao atao ny misafidy ny tolotrasa lojistikanao raha toa ianao ka miara-miasa amin'ny fepetra manokana company.We koa manaiky ny fandefasana entana araka ny fangatahan'ilay mpanjifa.
Ny fandefasana entana dia mifototra amin'ny habeny, lanjany, toerana misy ny fonosana. Manana fifandraisana ara-barotra maharitra amin'ny FedEx sy DHL izahay. Hanandrana ny tsara indrindra vitantsika izahay mba hanolotra anao ny vidim-panavotana. Ho an'ny fiarovana ny fonosana, dia hividy fiantohana ny ampahany betsaka amin'ny vola izahay.
Fandefasana entana maimaim-poana amin'ny baiko mahafeno fepetra mihoatra ny USD 1000.00 amin'ny DHL / FedEx. Raha toa ny totalim-bola ambany ambany USD1000.00 dia hampidiriny ny vidin'ny fandefasana USD60-110.00 amin'ny DHL / FedEx mifototra amin'ny lanjany / Size.
Matetika ny mpanentana dia manome kaonty an-tserasera amin'ny fitantanana ny entana entinao ary na dia lavitra kokoa aza.
Miankina amin'ny politika sy ny fitsipika entina rehetra. Ny vokatra sasany dia mety amin'ny ITAR voafetra ary ny fameperana fanondranana dia mety miteraka faharetana amin'ny fotoana fandefasana entana.
Fotoana sy fotoana mahasamihafa
Handamina ny fanafody isika ao anatin'ny 1-2 andro manomboka amin'ny datin'ny zavatra rehetra tonga any amin'ny trano fonenantsika.
a). Ny andron'ny orinasa dia ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma tsy misy Sabotsy, Alahady sy fialantsasatra.
b). Ny Time Delivery dia miankina amin'ny Fandefasana ny Fandefasana Entana sy ny Fanatitra.
Ny adidy, ny haba sy ny sara hafa dia ny andraikitry ny mpandray azy, satria ny fiampangantsika fotsiny dia mandrakitra ny saram-pitaterana entana. Raha te-hanombantombana ny sarany azo atao, azafady azafady amin'ny biraon'ny firenena misy anao.
Ity dia manolotra latabatra avy ao amin'ny trano fandefasana anay mankany amin'ny toerana misy anao.
DHL 2-4 Andro 3-4 Days 3-5 andro 3-6 Andro 3-5 andro 4-6 Andro
FedEx IP 2-4 Andro 3-4 Days 4-5 andro 3-6 Andro 4-6 Andro 4-6 Andro
* Ny fandefasana sy ny fandefasana dia voaisa amin'ny andro fiasana amin'ny Alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Amin'ny tranga fialantsasatra toy ny Krismasy, azafady mba avelao ny fotoam-pitaovana fanampiny. Mandritra ireo fotoana manokana ireo, dia hampahatsiahy anareo ny fanemorana izay mety.
Ny firenena manaraka eto dia tsy voatery mandefa an'io, noho ny politika: Afghanistan, Repoblikan'i Afrika Afovoany, Repoblika Côte d'Ivoire, Repoblika Demokratikan'i Congo, Repoblika Demokratikan'i Korea, Commonwealth of Eritrea, Repoblikan'i Libanona, Repoblikan'i Liberia, Repoblika Demokratikan'i Somalia, Repoblikan'i Sodana.
Raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ilay sambo, azafady mba mifandraisa aminay Info@infinity-electronic.com